श्रुति हसनलाई ब्रेकअपले धेरै सिकायाे « Name of Truth News : News Portal in Nepal
श्रुति हसनलाई ब्रेकअपले धेरै सिकायाे
प्रकाशित मिति : २०७८, आश्विन, २५, सोमबार १२:०५
साउथ फिल्मसँगै बलिउडमा पनि लोकप्रिय अभिनेत्रीमा पर्छिन् श्रुति हसन । अभिनेता कमल हसनकी छोरी भएकाले गर्दा पनि उनले दुवै फिल्म उद्योगमा कम पाइन् । तर, पछिल्लो समय उनकाे करियर सोचेअनुरूप ठीकठाक छैन । त्यसैले गर्दा उनी बेलाबखत विवादमा जोडिने गर्छिन् ।
अभिनेत्री श्रुतिले पछिल्लो समय ब्रेकअपको बारेमा बताएकी छिन् । ब्रेकअपले आफूलाई धेरै कुरा सिकाएको उनको बुझाइ छ । उनको ब्रेकअप केही समय अगाडि भएको थियो ।
आफ्नो लभ लाइफको बारेमा खासै नबताउने श्रुतिले एक अन्तर्वार्ताको क्रममा प्रेमका बारेमा बोलेकी हुन् ।‘त्यो सम्बन्धदेखि कुनै पछुतो छैन, किनकि हामीलाई हाम्रो गल्तीले नै हो सिकाउने,’ श्रुतिले भनिन्, ’पुरानो लभ लाइफबाट सिकेर अगाडि बढेकी छु ।’ उनको एक विदेशी प्रेमी थिए । उनले एक अर्कालाई चिन्न सहज नरहेकोसमेत प्रस्ट्याइन् ।
साथै, उनले प्रेमलाई जीवनमा बाधाका रूपमा नलिनसमेत बताइन् । ‘तपाईको जीवनलाई सहज बनाउने हो प्रेम, यदि त्यसले अवरोध गर्छ भने त्यो सम्झौता हो,’ श्रुतिले भनिन् । उनी पछिल्लो समय प्रभाससँग फिल्म सलारको काममा व्यस्त छिन् ।
ओली सरकारले नियुक्त गरेका राखेपका सदस्य सचिव सिलवालसहित ३ जना बर्खास्त !
प्रकाशित मिति : २०७८, कार्तिक, २, मंगलवार १३:४३
बंगलादेशमाअल्पसंख्यक हिन्दू समुदायमाथि भएका ऋंखलाबद्ध हमलाप्रति राष्ट्रसंघले चासो देखाएको छ । पछिल्लो समयमा हिन्दू समुदायको घरमा भएका आगजनी र मन्दिर तोडफोडप्रति राष्ट्रसंघले गहिरो चासो देखाएको हो । हिन्दूमाथिको हमला संविधानमा उल्लेखित मुल्य र मान्यताबिरुद्ध भएको भन्दै राष्ट्रसंघले घटनाबारे निस्पक्ष छानबिन गर्न आह्वान गरेको छ ।
प्रहरीले ती व्यक्तिको घरलाई सुरक्षा दिइरहेका बेला आक्रमणकारीले उनको छिमेकीको घरहरुमा आगो लगाइदिएका थिए । माजहिपरा जिल्लामा एक सातामा मुस्लिम आक्रमणकारीले १५ जना हिन्दूका २९ आवासीय घर, दुई ओट किचेन, तथा २० ओटा झुपडीमा आगजनी गरेको त्यहाँको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रकाशित मिति : २०७८, कार्तिक, १, सोमबार १९:५५
काठमाडौं । सरकारले पूर्ववर्ती केपी ओली सरकारका पालामा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरुलाई बर्खास्त गर्ने क्रम तीब्र पारेको छ । मन्त्रिपरिषदको सोमबारको बैठकले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव रमेश सिलवाललाई बर्खास्त गरेको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय युवा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष माधव ढुंगेल र युवा स्वरोजगार कोषका कार्यकारी उपाध्यक्ष डा. कल्याण रोक्कालाई पनि बर्खास्त गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुगेको छ । उनीहरु तीनैजना हटाउने कानूनी प्रक्रिया पुर्याउन दशैंअघि नै स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । राखेप सदस्य सचिव सिलवालसँगै स्पष्टीकरण सोधिएका ढुंगेल र रोक्कालाई पनि बर्खास्तीको पत्र दिने तयारी भइरहेको एक मन्त्रीले बताए ।